कलेजोमा ५ केजीको ट्युमर, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सफल शल्यक्रिया – Health Post Nepal
२०७५ पुष २७ गते १७:१३
डिस्चार्जपछि बिरामीसँग रेजिडेन्ट चिकित्सक (दायाँ) ट्युमर निकालिँदै (बायाँ)
काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कपिलवस्तुका ४४ वर्षे एक वयष्क बिरामीमा कलेजोको करिब ७० प्रतिशत भागमा फैलिएर जटिल बनिसकेको ५ केजी तौलको ट्युमरको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । सम्भवतः यो नै नेपालको सरकारी क्षेत्रमा कलेजोसम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो र चुनौतीपूर्ण शल्यक्रिया हो ।
वरिष्ठ शल्यचिकित्सक डा. रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच विशेषज्ञको टोलीले अघिल्लो साता करिब साढे ४ घण्टा लगाएर शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो । भण्डारी नेतृत्वको टोलीमा डा. निनादिनी श्रेष्ठ, डा. प्रमेससुन्दर श्रेष्ठ र डा. अजित थापालगायतको संलग्नता थियो । सफल शल्यक्रियाको सात दिनपछि अस्पतालबाट बिहीबार डिस्चार्ज भइसकेको र उनी पूर्णतः सुरक्षित रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । चिकित्सकका अनुसार शल्यक्रियाको समयमा बिरामीको ३ केजी रगत क्षति भएको थियो ।
प्रमुख डा. भण्डारीकाअनुसार कलेजोको दायाँपट्टिबाट करिब ७० प्रतिशत भाग पूरै ट्युमरले ढाकेको थियो । ‘हामीलाई देख्नासाथ कति काटेर फाल्नुपर्छ भन्ने थाहा भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘यो कलेजोलाई काट्ने प्रक्रिया नै सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । शल्यक्रियाका क्रममा अधिक रक्तस्राव भएर बिरामीको ज्यानै जाने जोखिम हुन्छ । बिस्तारै–बिस्तारै ट्युमरले ढाकेको सबै कलेजोको भाग काटेर फाल्यौँ ।’
बाँकी रहेको ३० प्रतिशत कलेजो क्रमशः बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘करिब ६ महिनाअघि बिरामीको कलेजोमा ट्युमर पत्ता लागेको थियो,’ डा. भण्डारीले बिरामीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘तर, उपचारका क्रममा विभिन्न ठाउँमा घुम्दाघुम्दै त्रिवि शिक्षण अस्पताल आइपुग्दा ट्युमर बढेर ५ केजी तौलको भइसकेको थियो भने यसको फैलावट ३० सेन्टिमिटरको थियो ।’
डा. भण्डारीका अनुसार हेमाइगियोमा नामक यो ट्युमरमा अन्य ट्युमरजस्तो क्यान्सर हुने, काटेर फाले पनि फेरि पलाउनेजस्ता जोखिम भने हुँदैन । तर, समयमै शल्यक्रिया गरेन भने बिरामीलाई अत्यन्तै दुुख्ने, फुट्ने तथा रक्तस्राव हुनेलगायत समस्या हुन सक्छ । ‘हामीले यसअघि १२ सेमीसम्मको यस्तोखाले ट्युमरको शल्यक्रिया गरेका थियौँ,’ उनले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘तर, यति ठूलो भने हाम्रा लागि निकै चुनौतीपूर्ण केस थियो ।’
डा. भण्डारीका अनुसार सुरुमा यति जटिल, दुर्लभ शल्यक्रिया गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधार चिकित्सकहरुमा भएको थियो । तर, अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण तयारी भइरहेको हुँदा चित्सिकहरुले विरामी पक्षलाई परामर्श दिई सहमति लिएर जटिल शल्यक्रियाको तयारी गरेका थिए । अस्पतालमा प्रत्यारोपणका लागि ल्याइएका अत्यधुनिक उपकरणसमेत जडान भइसकेकोले जटिल शल्याक्रिया गर्न सहज भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । ‘यो शल्यक्रिया सफलताले हामीमा थप जटिल शल्यक्रिया र प्रत्यारोपणको चुनौती लिन कन्फिडेन्स बढेको छ’ उनले हेल्थपोस्टसँग भने ।
शल्यक्रियाका विकसित पद्धति, आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण, विकसित एनेस्थेसिया र राम्रो आइसियू केयरलगायत कुराले यस्तो जटिल उपचारपद्धति पनि नेपालमा सम्भव भएको चिकित्सक भण्डारीले बताए ।
किन हुन्छ यस्तो ट्युमर ?
डा. भण्डारीका अनुसार यो ट्युमर किन पलाउँछ भन्ने जवाफ अहिलेसम्म छैन । यो जसलाई पनि हुन सक्छ । ट्युमर ३ देखि ४ सेमीसम्मको भए केही गर्नुपर्दैन । तर, बढ्दै गएर १० भन्दा माथिको भएपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । यस्तो ट्युमर बढ्दै गएपछि सहनै नसक्ने गरी दुख्छ ।
पूरा भयो कलेजो प्रत्यारोपणको तयारी
चिकित्सा विज्ञानमा जटिल मानिने कलेजो प्रत्यारोपणको तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको अस्पतालले जनाएको छ । कलेजोका एकपछि अर्को जटिल शल्यक्रिया सफलताले बहुप्रतीक्षित कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आत्मविश्वास बढेको डा. भण्डारी बताउँछन् ।
प्रत्यारोपणका लागि गत साता नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिको समूहले अस्पतालको तयारीबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सो समूहले योग्य ठहर गरी स्वीकृति दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कलेजो प्रत्यारोपणका लागि अनुमतिपत्र दिन्छ । ‘हामी अनुमतिपत्र पाउनेमा विश्वस्त छौँ,’ भण्डारीले भने, ‘यो शल्यक्रियाले आमजनमानसमा पनि कलेजो प्रत्यारोपणका लागि सकरात्मक सन्देश दिएको छ ।’